विश्वकप- ११ः ४५ बजे अन्तिम सेमिफाइनलमा इंग्ल्याण्ड र क्रोएसिया भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ? « News24 : Premium News Channel
विश्वकप- ११ः ४५ बजे अन्तिम सेमिफाइनलमा इंग्ल्याण्ड र क्रोएसिया भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । रुसमा जारी फिफा विश्वकप २०१८ अन्तर्गत आज अन्तिम सेमिफाईनलमा इंग्ल्याण्ड र क्रोएसिया आमने सामने हुँदैछन् । यी दुईको खेल नेपाली समय अनुसार पौने १२ बजे लुजनिकी स्टेडियममा हुनेछ । जहाँ जारी विश्वकपको फाइलन खेल पनि हुँदैछ ।